Maqaalka Matt Dyer ee Martech Zone |
Maqaallada by Matt Dyer
Matt Dyer waa Madaxa Iibka iyo Suuqgeynta ee Zilliqa, halkaas oo uu ka shaqeyn doono guud ahaan qeybaha Teknolojiyada Ganacsiga iyo Suuqgeynta si uu ugu fuulo macaamiisha shirkado badan adeegga Zilliqa ee BaaS. Matt wuxuu ka keenayaa 18 sano khibrad ganacsi labada iibin iyo aragtida suuqa.
Markuu Tim Berners-Lee ikhtiraacay World Wide Web ka badan soddon sano ka hor, ma uusan sii qiyaasi karin in Internetku u xuubsiiban doono inuu noqdo ifafaalaha meel walba leh ee ay maanta tahay, asal ahaan wuxuu beddelayaa habka ay dunidu u shaqeyso dhammaan dhinacyada nolosha. Kahor internetka, carruurtu waxay ku haminayeen inay noqdaan cirbixiyeenno ama dhakhaatiir, cinwaanka shaqada ee wax-ku-oolka ama abuuraha maaddada jirana si fudud uma jirin. Hore u sii soco ilaa maanta iyo ku dhowaad 30 boqolkiiba carruurta da'doodu tahay siddeed ilaa laba iyo toban